Fanamboarana noforonin'ny membrane afovoany izay manenitra ny fizarana fivoahana rehefa mihabetsaka ny tsindry entin'ny entana
Ny fonosana dia ao anaty akorandriaka mora foana hanamorana ny fanadiovana, raha ilaina izany
mikoriana: 2l / h 4l / h 8l / h 16l / h
130 micron / 120 harato.
Amporisihina indrindra rehefa takiana ny fahaiza-manao marina, amin'ny tany tsy misyvelarana ary amin'ny toerana ilana dripera mandoa tena.
Ampidiro sy satroka vita amin'ny polypropylene miorina amin'ny UV. Membrane vita amin'ny akora silicone.
-Ny tambiny manokana dia manomboka amin'ny 1.0 ka hatramin'ny 3.5 bar (10 ka hatramin'ny 35 mca)
Fiovana faran'izay avo indrindra raha oharina amin'ny fahaiza-manao anarana: + 7.5%
-Ny tambin-karama azo tamina fonontena manokana namboarina mba hitehirizana ny elastika ilaina, na dia amin'ny sarotra aza ny fampiasana azy.
Fidirana sy satroka vita amin'ny fitaovana afaka manome toky ny fanoherana ny atmosfera sy ny fisehoan'ny harafesina noho ny fahavokarana, ary ny faharetan'ny fivoahana ara-potoana Outlet miaraka amina fametahana fantsona mikraoba 03.5 × 6 Misy amin'ny 2/4/8/16 l / h miaraka amina fototra miloko samy hafa hamelana
famaritana fahaiza-manao eo noho eo:
Fototra manga 2l / ora lanitra, fotony mainty 4l / h, fototra manga 8l / h, fototra volontany 16 l / h
Previous: Sivana T type-Screen
Manaraka: Zana-tsipìka mitete
Kitapo mitete arrow
Dripper Irrigation azo ovaina
Driper fanondrahana micro
Tsiranoka fanonerana fanonerana
Driper fanonerana ny fanerena
Dripper azo ovaina
Dripper mikorontana Neo PC